Isitayela samaNdiya inhlanganisela yokunethezeka, ubuqiniso kanye ne-minimalism. Yiqiniso, ekuboneni kokuqala, kubonakala sengathi lezi zinto azihambisani, noma ngabe uzibone ngamehlo akho igumbi elinikeziwe ngesitayela samaNdiya, ngokuqinisekile uzoqonda ukuthi yini ekhona. Isitayela samaNdiya ngaphakathi angumhlanganisi wembala ekhanyayo, ehlukahlukene, ifenisha eqoshiwe kanye nezingubo eziningi. Lesi sitayela sasivela ezweni elikude elikude - e-India, emva kwalokho laphumelela ngesibindi indawo ehloniphekile nenhlonipho yabakhiqizi bethu abaningi. Okuyinhloko yesitayela ukuthi kungase kuhlanganise isici esibonakala sengathi singathandabuzi ngokumelene nesizinda somkhathi omuhle futhi ocolile kakhulu. Ngokomlando, lesi sitayela sesisungulwe ngesikhathi sokusakazwa kwamafilimu aseNdiya, okungukuthi ngama-80-90. Namuhla, abantu abaningi banamathele kulesi sitayela ngaphakathi kwendlu yabo noma indlu, ikakhulukazi esiseduze nalabo abathanda inkolo yaseMpumalanga noma umlando.
Ukuze wenze i-intanethi isitayela samaNdiya, udinga ukucabanga ngaphambi kwayo yonke imininingwane, imibala, ukhethe ifenisha nezakhi zokuhlobisa. Kubalulekile ukunamathela ekhiweni elilodwa, futhi ifenisha kungcono ukuyisebenzisa kusuka ezintweni zemvelo. Ngokuvamile, ekwakheni ingaphakathi lesitayela samaNdiya, khumbula ukuthi zonke izinto kumele zibe yendalo, akukho ipulasitiki - akusiyo i-high tech, kodwa isitayela sezwe esiyiqiniso. Ukunakwa okukhulu ngesitayela saseNdiya kunikezwa abaculi, imidwebo kanye nemidwebo yodonga. Izinguquko zanamuhla zesitayela, ezidalwe ngabaqambi, zingahluka emiklambini yobuciko - imibala elula ingasetshenziswa lapha, futhi kungase kube nokulinganisa okwakungekho endaweni yangaphakathi yaseNdiya. Ungafakazela ngesibindi ukuthi lesi sitayela sikhethwe ngabantu abaqhakazile, abayinkimbinkimbi abanefilosofi yokuphila futhi balungele izinguquko ezinkulu ekuphileni kwabo.
Izici zesitayela samaNdiya
Isici esikhethekile isitayela samaNdiya ukusetshenziswa kwezixhobo zemvelo ezivela kulokhu, kanye nomhlobiso onemibala ekhanyayo enezimo ezihlukahlukene. Kulesi sitayela kuhle ukusebenzisa izambatho ezikhanyayo, amaphepheni ezenziwe ngezandla ze-Sindi motifs, ifenisha ye-wicker, ifenisha evela enkuni yemvelo (ubumnyama obuhle), inhlanganisela yeminyango ye-arched nama-niches ezindongeni. Kubaluleke kakhulu uma uhlela ukuklama kwangaphakathi ngesitayela saseNdiya ukuze uqaphele ukuthungwa kwezinto ezizosetshenziswa.
Ngokwesiko, izindonga zendabuko zaseNdiya zingavezwa ngombala owodwa - lokhu kungaba umthunzi ofudumele we-terracotta, ipayipi noma ushokoledi. Futhi ukwamukeleka ukuhlanganisa izindonga ngezimpi ze-vinyl ngenhlonipho ephathekayo. Njengendlela ehlukile, izindonga zingadluliselwa ngephepha lodonga elilinganisa izindwangu ze-chic. Uhlelo lombala, njengoba kushiwo ngaphambili, kufanele luhambisane namathoni afudumele namanzi. Ezindongeni, imihlobiso noma imidwebo enetimu efanayo ingavezwa.
Amapulazi ngesitayela samaNdiya kufanele abe nemvelo. Ngokwesiko, zenziwe ngamapulangwe noma zenziwe ngamatshe. Lokhu kwakungenxa yokuthi iNdiya ishisa kakhulu, futhi phansi kwetshe liyashisa kakhulu, ngakho-ke kuyindlela enhle yabakhileyo bendawo. Ngakho-ke, unikezwe ngezinsiza ezihlukahlukene zanamuhla zokubeka phansi, ungasebenzisa i-parquet flooring, laminate, marble enye itshe. Umbala wezansi kufanele ube mnyama, mhlawumbe umnyama noma u-grey uma kusetshenziswe itshe.
Ukwakheka kwesitayela saseNdiya ngokujwayelekile kuvalwe imihlobiso ekhanyayo, kungenziwa futhi kuboshwe kusuka kwendwangu. Ngemva kwesikhashana, indwangu yayinezindawo zokushisa nokukhathala, bese kukhishwa enye entsha. Esikhathini samanje sesitayela samaNdiya, kungcono ukusebenzisa ukufakela kokulula, okuzokwenza ukuthi yonke ingaphakathi ikhulume kakhulu. Umbala welayili kufanele ukhethwe ngokuhambisana nombala wezindonga, kubaluleke kakhulu ukuthi bavumelane ngokuvumelana, futhi kwakungekho ushintsho olubukhali.
Kubalulekile futhi ukusebenzisa izesekeli. Bayodala isitayela ongathanda ukufezekisa. Njengoba uyazi, okushiwo lokhu noma ukuthi ukuklama kubonakala ezintweni ezincane - kulokhu kuzinsiza kanye nemininingwane encane. Ungathenga noma ukuthunga imithwalo embalwa enemibala, ugqoke izibalo zezindlovu zamatafula, nokuhlobisa amakamelo nezitovu zempepho ezihlobisa, amakhandlela athambileyo, izambulela zezihlahla, izibalo zeBuddha.
Isitayela samaNdiya ekamelweni lokulala
Isitayela saseNdiya esingaphakathi kwendlu yokulala yindiza yokucabanga kwakho njengomklami. Umbhede ungenziwa ngokugcwele emkhunjini wemvelo, futhi ngokufaka izakhi ezifakwe ematheni, ikakhulukazi ekhanda lombhede. Kubalulekile ukuthi umbhede uphinde ukhethwe ngokuhambisana nesitayela esithathiwe ngaphakathi. Ngakho, i-bedpread and pillows ingabanjwa kusuka ezintweni zemvelo ezinemibala egqamile, i-silika noma i-cotton eyindilinga. Ekamelweni lokulala ungabeka ifenisha yendabuko yaseNdiya ekugqoka izingubo, ezenziwe ngamapulangwe nangelineni. Indawo ekhethekile ekamelweni lokulala kufanele inikezwe izibani ezingaba yizilwane zaseNdiya futhi zenze umkhathi odingekayo ekamelweni. Kubalulekile futhi ukuthi ikhabhinethi yenziwe njenge-window shutter, ebhekwa njengamaNdiya futhi ingasetshenziswa ukugcina izitayela ezifanayo ngaphakathi kwekamelo lokulala.
Isitayela samaNdiya egumbini lokuphumula
Into esemqoka kanye nendawo yokugcina yokulala, okubandakanya amaNdiya, iyinsifa. Kungaba i-antique, eqinile, eyenziwe ngamapulangwe futhi igcobe. Imilenze yamapulangwe eqoshiwe ye-sofa kanye ne-armrests yilokho okudingayo ukuze ubuyekeze isitayela samaNdiya egumbini lakho lokuphumula. Kubaluleke kakhulu ukuthi igumbi lokuphumula likhanya futhi lilungele ukuthola izivakashi. Beka ekamelweni lakho futhi ungasonga ifenisha, isibonelo, izihlalo ezimbalwa kanye nomagazini. Ngokuqondene nezakhi ezengeziwe zokuhlobisa, kungaba yikhampasi enezithombe ezithakazelisayo, izingcezu zibekwe ezindongeni, kanye nezibani zokugqoka nezibani eziphansi. Ukugeza ngaphakathi egumbini lokuphumula kubhekwe kangcono nge-laminate noma kufaka isembozo sezinkuni zemvelo. Kusukela phezulu kuyoba kufaneleka ukubeka ikhabethe elithambile ngosizo lwemidwebo yezithombe. Ngokuvamile, igumbi lokuphumula kufanele livuleke, kodwa ngesikhathi esifanayo likhululekile futhi lidale umqondo wesimo esiseduze. Lokhu kungasiza ekwenzeni impepho namakhandlela enamekayo.
Isitayela samaNdiya ekhishini
Eqinisweni, ikhishi le-style yaseNdiya lihlotshiswe kumbala owodwa wombala njengamanye amagumbi endlini yakho. Qinisekisa ukuthi unake ukuhlanganiswa okuhambelanayo kwemibala ekhanyayo kanye nesimo sangemuva esivelayo. Itafula ekhishini elinjalo kufanele libe ngaphansi kwezinkuni zemvelo, futhi izitulo ezijwayelekile zithathelwe indawo enobuningi obuqinile obunamapulangwe obhekwe ngendwangu ekhanyayo yokuphumula. Izitsha kufanele zibe yi-porcelain noma zensimbi ngokuxosha. Ngokuvamile, into esemqoka ekuhlobiseni i-"Indian" cuisine yukusetshenziswa kwezixhobo zemvelo. Izakhi zemifino, imibala ekhanyayo nejulile.
Isitayela samaNdiya endlini yokugezela
Indlu yokugezela ingahlotshwa ohlelweni lombala ohlukile - lungaba yinhlanganisela ye-beige neyesihlabathi nanoma yikuphi ukuhluka kwe-bluish. Kusukela kumathayili wekhwalithi nokuhlala ungakwazi ukubeka iphethini kazwelonke noma umfanekiso wendlovu, okubhekwa njengingcwele eNdiya. Izakhi ezingeziwe zingabhasikidi eziboshwe noma bamboo, izicabha zamapulangwe, izibani ezifakiwe. Uma indlu yokugezela ifaka iwindi, qiniseka ukuthi ukhetha kuyo izimpumputhe ze-bamboo. Kakhulu kakhulu egumbini elinjengalokhu kuzobukeka njengokugeza okuzungezile noma okwesibhakabhaka, kodwa akusi mhlophe, kodwa okungenani kunesihlabathi noma se-beige.
Indlela yokuphila yaseMelika ephakathi
Ukwakhiwa kwamakamelo okulala: Isitayela sase-Italy
"Izingubo" zendonga noma indlela yokukhetha amaphephadonga
I-interiors engcono kakhulu: indawo yokuhlala encane
Ukulimala, izingozi ezinganeni
Amantombazane ahlakaniphile 2016: izingubo ezifashisayo kunazo zonke zabafana beminyaka yonke
Imikhiqizo edumile kunazo zonke zokugqoka: umlando
Ithonya elangeni empilo yabantu
Isobho sobisi nobhanana
UDkt. ULisa wayephakathi kwalabo ababulewe ekushayweni kwezindiza eSochi
10 izinto ezingavunyelwe ukuzenza emsebenzini
Ungazivikela kanjani okhuhlane ehhovisi
Ikhekhe nama cherry
Indlela yokunciphisa amabele amakhulu futhi wenze okuqinile
Ukupheka ikhekhe elimnandi lekhekhe
Isaladi lesiklabishi lamaShayina nenkukhu
Ukukhetha umbala wendwangu yembhedeni
Iyini isitayela sebhizinisi nezinhlobo zayo?